Soso-kevitra feno momba ny fampitomboana ny ROI Advertising per Pay Click | Martech Zone
Alarobia, Desambra 23, 2015 Alarobia, Desambra 23, 2015 Douglas Karr
Mandritra ity infographic avy amin'ny Datadial firenena ho an'ny orinasa kely, Tsoriko am-po fa miara-miasa amin'ny orinasa sy orinasa lehibe izay tsy manararaotra ny ankamaroan'ireo toro-hevitra ireo izahay! Ity no lisitry ny torohevitra feno indrindra hitako raha ny amin'ny fampiasana amin'ny fomba mahomby kokoa ny dokambarotra karama isaky ny mandeha amin'ny Google.
Na inona na inona indostrianinao, ny tetika azonao ampiasaina hanamorana ny fiainana ho an'ny fitantanana PPC dia tsy miova. Ity infographic ity (avy amin'ny Datadial ho anao, miaraka am-pitiavana) dia manaparitaka hevitra 53 momba ny fahombiazan'ny Pay-Per-Click. Dingana 53 mankany amin'ny fahombiazan'ny PPC farany ho an'ny orinasa madinidinika
Torohevitra Pay and Click
Lalao nifanaraka - afangaro ny teny karoka malalaka sy manokana rehefa mandeha ny fotoana.
Ads - Manandrama fitadiavana fikarohana sy fitambarana doka isan-karazany.
Competition - Inona ny vidiny sy ny hafatra ampiasain'ny mpifaninana aminao?
Fanitarana doka - Ny fanitarana dia mitondra fifamatorana bebe kokoa ary tsy mandany vola fanampiny.
Teny fanalahidy lava - matetika dia kely ny vidiny, mifandraika be ary mitarika fiovam-po bebe kokoa.
Teny lakile Dynamic - Ovaina ho azy ny teny lakileo amin'ny doka iray dia afaka mampitombo ny tahan'ny fifandanjana sy ny fiovam-po.
Aza manary tsindry - Mampiasà teny fanalahidy ratsy mba hialana amin'ireo fitambarana tsy misy ifandraisany izay tsy ho hitan'ireo mpampiasa karoka.
fitsapana - mandinika ny angona, manova izay tsy mandeha ary manadio izay mandeha.
tapaka - miantoka ny laungage sy ny feonao mifanentana amin'ny marikao sy ny atiny.
Fantaro ny fikarohana sy ny analytics an-tranonkala
Multi-fantsona - fantsona fikarohana, fampisehoana, fiantsenana, fantsona finday sy horonan-tsary.
Generic - sorohy ny teny karoka mahazatra izay mety hampiakatra ny vidinao sy ny fifamoivoizanao, fa tsy hitarika fiovam-po.
Location - raha toa ka manana orinasa eo an-toerana na eo an-toerana ianao, dia hametraha tanjona.
Mponina - kendreo ny mpihaino anao arakaraka ny taonanao, ny lahy sy ny vavy ary ny toetra hafa.
Best Practices - alao antoka fa mifanaraka amin'ny torolàlana ny doka-nao.
Data - sambory angon-drakitra araka izay azonao atao mba handaminana tsara ny paikadinao.
Forms - mitazona endrika fohy sy mamy.
Fakafakao - diniho ny angon-drakitrao hahitanao ireo fotoana mety.
Doka amin'ny doka, doka aseho
Remarket - mifandraisa amin'ireo mpitsidika rehefa avy nampiasa ny tranokalanao ianao ary lasa.
Device - andramo lasibatra amin'ny finday, birao na izy roa mba hahitana ny tsy fitovizany.
Tsindrio hiantso - manolora fomba amin'ny doka finday hiantsoana mivantana amin'ny doka.
Clickability - ataovy tsindrio mazava tsara ny sarinao.
Naoty sy hevitra nataon'ny mpivarotra - asio naoty sy hevitra ho an'ny fitokisana bebe kokoa.
URL - ampidiro ny teny lakile ao anaty slug rohinao.
Graphics - Mampiasà sary mifandraika amin'izany.
Speed - Ny fitomboan'ny haingam-pejy dia hanatsara ny isa kalitaon'ny doka anao.
manaiky - alao antoka fa mamaly ny fijerinao finday na birao ny tranokalanao.
famandrihana - ampio fisoratana anarana amin'ny mailaka mba hifandraisana hatrany amin'ireo mpitsidika liana.
Optimization - mampihena ny isan'ny tsindry ilaina raha hiova.
Testimonials - asehoy fijoroana vavolombelona eo amin'ny tranokalanao hahazoana fitokisana.
Ity dia vitsivitsy monja amin'ireo torohevitra manan-danja kokoa, ity ny infographic iray manontolo:
Tags: adwordsfanitarana dokaAnalyticstsindrio fanatsarana ny fantsonatsindrio hiantsodatadialMponinapejy fiantsonana biraomampiseho dokateny lakile dynamiquefanatsarana endrikateny lakile genericlasibatra ara-jeografikagoogle adwordsGoogle Analyticsmampihiditrapejy fanatsarana pejytoerana kendrenateny lakile lava rambopejy fitobiana findayfinday ppcmulti-fantsonateny fanalahidy ratsypage speedkitapo voaloafikarohana karamafitiliana karama karamamandoa isaky ny kitihoppcdoka ppcfanadihadiana momba ny ppcppc findayfanandramana ppcremarketingmanaikyhevitrahevitry ny mpivarotrafijoroana vavolombelona
Antontan'isa 5 manaporofo ny fitaovana fivarotana finday dia manatsara ny fahombiazany